၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အခြေခံဥပဒေပြင်နိုင်မယ် ယူဆကြောင်း ဦးရွှေမန်းပြော
နေပြည်တော် ဇမ္မူသီရိခန်းမဆောင်မှာ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းစဉ်
လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆကြောင်းနဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ထံတင်ပြဖို့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီက ပြင်ဆင်နေတာ အခုဆိုရင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပြီးစီးနေ ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ဇမ္မူသီရိခန်းမဆောင်မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားလုံပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်၊ ကြိုးစားပြီးလည်းဆောင်ရွက်နေ တယ်၊ ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းဖြစ်အောင် ဆောင် ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ်လောက်အထိပြီးပြီလဲဆိုတာ အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့ လောလောဆယ် လွှတ်တော်ကို တင်ပြနိုင်ဖို့ကို ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးနေပါပြီ၊ ဒါကြောင့် လာမယ့် လွှတ်တော်ကာလမှာ ဥပဒေကြမ်း အဖြစ် တင်သွင်းနိုင်ဖို့ စပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါမယ်"
ဒါ့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးရမှ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို ပြင်မယ်၊ လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြီးမှ ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ကို ပြင်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကို ပြင်သင့်တဲ့အချိန်မှာ ပြင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။
သူရ ဦးရွှေမန်းရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်း RFA သတင်းထောက် မဝေမာထွန်း တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း ပြည်သူလွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်သစ် ပေါ်ပေါက်ရေး လေ့လာ သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဟာ မနေ့က ပထမဆုံးအကြိမ် အစည်းဝေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ အခုသြဂုတ်လအတွင်း ပြန်လည်တွေ့ဆုံပြီး ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကို လေ့လာသုံးသပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ် လို့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဒွဲဘူက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်ဒွဲဘူကို RFA အဖွဲ့သူ မသင်းသီရိက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
80 ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေတဲ့ ဥပဒေဟာ မင်းကြီးကြိုက်ဥပဒေပါ။ ပြည်သူတွေပြင်စေချင်တဲ့ဥပဒေ မပါသေးပါဘူး နောက် 20ရာခိုင်နှုန်းကျန်နေတဲ့ဥပဒေမှာ ပြည်သူတွေပြင်စေချင်တဲ့ဥပဒေ ထည့်ပါခင်ဗျား မင်းကြီးများ
Aug 06, 2014 04:53 AM
The main problem of Myanmar is that present government concern only to hold power rather than to listen people desires. They care only power but not for the development of Myanmar.
Aug 04, 2014 02:20 AM
Problem is what the Parliament will amend from the constitution isaquestion. He is not saying that. What will they amend? to have PR system? Instead of amending article 436?
Aug 03, 2014 05:21 AM
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြခံဥပဒေကို စစ်အစိုးရအကျိုးအတွက် စစ်အစိုးရ အလိုကျ လျှို့ဝှက်ရေး ဆွဲခဲ့ေ ပြီး
အဲဒီအခြေခံဥပဒေကို အစအဆုံး ဖတ်တဲ့သူမရှိ ဘဲပြည်သူ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ထောက်ခံခဲ့တယ်.ဆိုပါတယ်။
ဒီကနေ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြခံဥပဒေကိုလျှို့ဝှက်ရေးဆွဲ ပြင်ဆင်နေတာ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးနေပါပြီ ဆိုပါတယ်။
တော် ကြာတစ်မျိုး၊ တော် ကြာတစ်မျိုး၊အနှစ် ၆ဝ ကျော် တိုင်းပြည် ကို စုပေါင်း ဖျက်ဆီးခဲ့ တာ အားရသေးပုံ မပေါ်ဘူး။
Aug 02, 2014 01:25 AM